Isigqibo sebali eligqibeleleyo, nguHoracio Quiroga | Uncwadi lwangoku
UHoracio Quiroga, wayengu Umdlali odlalayo wase-Uruguay kunye nembongi ogama langempela nguHoracio Silvestre Quiroga Forteza. Wazalwa ngo-1878 kwaye wasweleka ngo-1937 suicidio. Emva kokufumanisa ukuba unengxaki yomhlaza wedlala lobudoda, wathabatha iglasi yecyanide kwisibhedlele esinye apho wayelaliswe khona.
Ukongeza ekusishiyeleni imisebenzi emininzi elungileyo yoncwadi, esiza kuyishwankathela apha ngezantsi, wasishiya nodumo «Isigqibo esifanelekileyo sombalisi webali». Kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, ndabelana ngokwam Ishumi (decalogue) lombhali olungileyo; Namhlanje ndikwanikezela ngesigqibo salo mbhali ubalaseleyo ngelishwa lakhe wasishiya kungekudala. Ndiyathemba uyonwabele!
Imisebenzi yoncwadi kaHoracio Quiroga
"Idayari yokuhamba usiya eParis."
"Ibali lothando olungenangqondo."
"Iindaba zothando, impambano kunye nokufa".
Ukuze ubalise ibali ... (NguHoracio Quiroga)
Kholelwa kutitshala - Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov - njengakuThixo ngokwakhe.
Ucinga ukuba ubugcisa bakho yinto engenakufikeleleka. Musa ukuphupha ngokumenza mbuna. Xa ungayenza, uya kuyifumana ungazazi ngokwakho.
Melana nokuxelisa kangangoko unako, kodwa xelisa ukuba impembelelo inamandla kakhulu. Ngaphezulu kwayo nayiphi na into, ukukhula komntu kuthatha umonde omde.
Yiba nokholo oluyimfama hayi kumandla akho okuphumelela, kodwa kwi-takatso onqwenela ngayo. Thanda ubugcisa bakho njengentombi yakho, umnike yonke intliziyo yakho.
Ungaqali ukubhala ungazi ukusuka kwigama lokuqala apho uya khona. Kwibali eliyimpumelelo, imigca emithathu yokuqala iphantse yabaluleka njengemithathu yokugqibela.
Ukuba ufuna ukubonisa ngokuchanekileyo le meko: «Ukusuka emlanjeni kubanda umoya obandayo», akukho magama ngolwimi lomntu kunalawo abonakalisiweyo ukuwaveza. Nje ukuba ungumnikazi wamazwi akho, ungakhathazeki ngokujonga ukuba ahambelana okanye ahambelana.
Musa ukwenza izichazi ngokungeyomfuneko. Ayinamsebenzi iya kuba mingaphi imisila enemibala oyincamathisela kwisibizo esibuthathaka. Ukuba ufumana echanekileyo, uya kuba nombala ongenakuthelekiswa nanto. Kodwa kufuneka ifunyenwe.
Thatha abalinganiswa bakho ngesandla kwaye ubakhokelele ngokuqinileyo ukuya esiphelweni, ungaboni nto ngaphandle kwendlela obalandele yona. Sukuphazanyiswa kukubona abanako okanye abangakhathaliyo ukukubona. Sukuhlukumeza umfundi. Ibali yinoveli esulungekisiweyo yokusikwa. Thatha oku kuyinyani epheleleyo, nokuba ayiyiyo.
Musa ukubhala phantsi komgaqo weemvakalelo. Makasweleke, kwaye umphephe kamva. Ukuba uya kukwazi ukuyiphinda njengokuba yayinjalo, ufikelele kwinqanaba lesiphelo kubugcisa.
Sukucinga ngabahlobo bakho xa ubhala, okanye umbono oza kwenziwa libali lakho. Bala ngokungathi ibali lakho alinamdla ngaphandle kwendalo encinci yabalinganiswa bakho, onokuthi ube ngomnye wabo. Ngaphandle koko ufumana ubomi bebali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » I-Decalogue yombali obalaseleyo, nguHoracio Quiroga
Ezona ncwadi zithengisa kakhulu kwi-2016 kwiAmazon